Weghachi Yelp na Nyocha Google site na Ngwa Ndị Ahịa Gị Jiri! | Martech Zone
N'oge na-adịghị anya, anyị nwere mkparịta ụka mara mma na Daniel Lemin, onye edemede nke AKWpuKWỌ: Otu ndị nwere azụmaahịa nwere ike isi luso ọnụọgụ ntanetị na nyocha na ntanetị. O kwuru mkpa ọ dị ijide nyocha iji nweta nyocha ọhụụ ma luso nyocha ọ bụla na-adịghị mma nke nwere ike ibilite site n'oge ụfọdụ.
Enwere oge dị mma iji weghachite nyocha dị ukwuu karịa mgbe onye ahịa nwere afọ ojuju hapụrụ azụmahịa gị? Eleghị anya ọ bụghị - ya mere, gịnị ma ị mejuputa usoro nke na-eme ka nyocha ndị ọzọ ma mee ya ngwa ngwa. Nyocha na Ihe eziga njikọ site na SMS na onye nlekọta gị. Mgbe onye nlekọta ahụ mepee ibe ọdịda, ibe ahụ na-ewepụta njikọ njikọ maka ngwa ekwentị Yelp ma ọ bụ Ngwa Google Mobile na ekwentị ha.
Ebe ọ bụ na ngwa ndị ahụ abanyelarị, nke a na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke usoro ọ chọrọ ịkwaga onye ahịa site na obi ụtọ… ka ederede! Chọta nyocha ọ bụla dị mma nwere mmetụta na azụmahịa gị, yabụ gịnị ma ị weghara ya oge ọ bụla? Nke a na - aba uru maka nyochaa algorithms - nke na - eleba anya na nyocha nke nyocha, ọ bụghị naanị ọnụ ọgụgụ ha.
Nyocha ndị metụtara
Miri-ejikọ ekwentị ekwentị technology
Mwekota nke YELP gị! na akaụntụ Google
Nchịkọta nke nyocha gị niile n'otu ibe weebụ maka nkesa agbakwunyere
Usoro nyocha nyocha email
Na-akuko kwa ọnwa
Ntọala ihe mgbaru ọsọ na-aga n'ihu na ọzụzụ otu
Mbipụta Starter Kit
Tags: google mobile nyochagoogle azụmahịa mnyocha googlemkpanaka nyochaNyochaa ahụ dị mkpaSMSsms nyochaederedeozi ederedeYelpyelp nyocha